Ciidamada DFS oo weeraray ilaalo uu heystay Gen. Xuud. – Banaadir Times
Ciidamada DFS oo weeraray ilaalo uu heystay Gen. Xuud.
By banaadir 28th November 2020 156 No comment
Duleedka Magaalada Baladweyne waxaa lagu weeraray Ciidamo u heysto Abuukar Xaaji Warsame oo ku magac dheer Xuud oo todobaadkii lasoo dhaafay labo jeer baajiyay safar Madaxweynaha Hir-Shabeelle uu ku tagi lahaa Xarunta Gobolka Hiiraan.
Mas’uuliyiin katirsan Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa Mustaqbal u sheegay in Odoyaasha dhaqanka Magalaada Baladweyne ay ku guuldareysteen in Abuukar Xaaji Warsame Xuud ay ku qanciyaan in uu joojiyo is hor istaagga Madaxweyne Cali Guudlaawe.
Musalsalka Dhaqtarkii Mucjisada Xalqadii 2aad
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho.
Ururada bulshada rayidka ah ” Waa in Muqdisho lagu qabtaa shirka lagu baaqay”
By banaadir 12th February 2021